“ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုပေးတဲ့ နတ်သုဒ္ဓာအသီး (သို့) စွန်ပလွန်သီး” – Askstyle
“ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုပေးတဲ့ နတ်သုဒ္ဓာအသီး (သို့) စွန်ပလွန်သီး”
စွန်ပလွန်သီးကို ငယ်စဉ်အရွယ်အခါ စာရေးသူမြန်မာပြည်မှာနေထိုင်စဉ်က အကြိမ်အနည်းငယ်မျှစားသုံးဖူးပါတယ်။ ယိုထိုးထားတဲ့အတွက် ချိုအီဆိမ့်တဲ့အရသာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ထက်ပိုပြီးစိတ်မဝင်စားမိခဲ့ပါဘူး။
စင်္ကာပူမှာနေထိုင်စဉ် စာရေးသူရုံးမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေ(ကျား/မ) ဥပုဒ်ဖြေချိန်မှာစားသုံးတာတွေ့မိပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါတောင်းယူစားသောက်မိပါတယ်။ ထို့ထက်ပိုပြီးစိတ်မဝင်စားမိခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေ့တော့ ရုံးအားလပ်ရက်ဟင်းချက်စရာဈေးဝယ်ထွက်ရင်း အမှတ်မထင်စွန်ပလွန်သီးယိုအထုပ်ကို ဈေးမှာတွေ့လို့ကိုင်ကြည့်မိရင်း သူရဲ့ Nutrition Fact လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝအဟာရပါဝင်မူ့နှုန်းဇယားကိုကြည့်မိလိုက်ချိန်မှာတော့ အံသြမူ့အကြီးကြီးဖြစ်မိပြီး စွန်ပလွန်သီးကို စွန်းခိုက်မိပါတော့တယ်။
ဈေးကအမြန်ပြန်ပြီး Date Fruit လို့ခေါ်တဲ့ စွန်ပလွန်သီးအကြောင်းကို ကွန်ပြူတာဖွင့် Google ခေါက်ပြီး စူးစမ်းရှာဖွေ research လုပ်မိသမျှကို စာဖတ်သူ ညီ၊ညီမတို့ ဗဟုသုတအတွက်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
စွန်ပလွန် ခေါ်( Dates ) ပင်ကိုရေရှားပြီး အခြားသီးနှံစိုက်ပျိုးရန် ခက်ခဲသောမြေတန်းစားများ အပူပိုင်းဒေသ သဲမြေ စသည့် မြေအမျိုးစားတွေမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အပင်မှာထန်းပင်ကဲ့သို့ဖြောင့်တန်းပြီး အရွက်မကြွေပါဘူး။ အသီးမှာ ဇီးချိူသီးသဏ္ဍာန် လုံးဖြောင့်တန်းပြီး အစေမှာလည်း ဇီးသီးအစေ့ဖြင့်ခပ်ဆင်ဆင်ရှိပါတယ်။
လက်မအရွယ်အစား စွန်ပလွန်သီးတနေ့ ၁ လုံးစားသုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မူ့များအတွက် ခွန်အားဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။သဘာဝအပင်မှာရှိနေစဉ်တွင် အသီးမှာအဝါနုရောင်ဖြစ်ပြီး ချိုမြသောအရသာနှင့်စေးကပ်သောအတွင်းသားတွင်ဖိုက်ဘာအမျှင်ဓါတ်များဖြင့်အစေ့ကိုဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့် စွန်ပလွန်သီး ၁ လုံးတွင် ၂၃ ကယ်လိုရီပါဝင်ပြီး၊ ကိုယ်လက်စထရောလုံးဝ ၁၀၀% ကင်းစင်တာက အံဖွယ်ရာပါဘဲ။
စွန်ပလွံသီးတွင် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ်နှုန်းမှာတော့
Proteins . 2.0
Calories . 23.0
Sodium . 4.7
Potassium . 754.0
Calcium . 67.9
Magnesium . 58.9
Copper . 0.21
Iron . 1.61
Phosporus . 638.0
Sulphur . 51.6
Chlorine . 290.0
vitamins A1, B1, B2, B3 and B5
(၁) စွန်ပလွန်သီးသည် ကိုလက်စရောဓာတ်ကို များစွာလျော့ချ ပေးနိုင်သည့် အပြင် အဝလွန်သူများအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဓာတ်ကိုလည်း ကြွယ်ဝစေပါတယ်။
(၂) ဗီတာမင် B1, B2, B3 နှင့် B5 တို့ကြွယ်ဝစေသည့် အပြင် ပရိုတိန်းဓာတ်ကိုလည်း ကြွယ်ဝစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Gym အားကစားသမားများအတွက် (Pre and Post Workout)မကစားခင်နှင့်ကစားပြီးချိန်တွင် အနည်းဆုံး စွန်ပလွန်သီး ၂ လုံးမျှစားသုံးယူသင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုနေသူများအတွက် သဘာဝအချိုဓါတ်ပါဝင်တဲ့ စွန်ပလွန်သီးတနေ့ ၃-၄လုံးရဲ့အချိုဓါတ်ဟာ ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မူ့များစွာမဖြစ်စေပါဘူး။
(၃) စွန်ပလွန်သီးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုလည်း ပေးပါတယ်။ ဆိတ်၊နွားနို့နှင့် တွဲသောက်ပေးပါ။
(၄) စွန်ပလွန်သီးသည် အာရုံကြောများအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ စွန်ပလွန်သီးကိုချေမွပြီး ဆိတ်၊နွားနို့ဖြင့် မနက် ၁ ခွက်၊ ည ၁ ခွက် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အံဖွယ်ကာမစွမ်းအားကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
(၆) စွန်ပလွန်သီးကို ရေဖြင့် သောက်ပေးပါက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။
(၇) စွန်ပလွန်သီးသည် ကြွက်သားများကို သန်မာစေနိုင်တဲ့ အပြင် ခန္ဓာကိုယ် သွယ်လျစေချင်သူတို့ အတွက် စားသင့်ပါတယ်။
(၁၀) Low blood Pressure သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ Paralyisis လေဖြတ်ခြင်း၊ Facial Paralysis မျက်နှာတစ်ခြမ်းလေဖြတ်ခြင်း တို့ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Credit to Wsda Dom
လကျမအရှယျအစား စှနျပလှနျသီးတနေ့ ၁ လုံးစားသုံးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျခန်ဓာနစေ့ဉျလုပျဆောငျမူ့မြားအတှကျ ခှနျအားဖွဈထှနျးစပေါတယျ။သဘာဝအပငျမှာရှိနစေဉျတှငျ အသီးမှာအဝါနုရောငျဖွဈပွီး ခြိုမွသောအရသာနှငျ့စေးကပျသောအတှငျးသားတှငျဖိုကျဘာအမြှငျဓါတျမြားဖွငျ့အစကေို့ဖုံးကှယျထားပါတယျ။ပမျြးမြှခွငျးအားဖွငျ့ စှနျပလှနျသီး ၁ လုံးတှငျ ၂၃ ကယျလိုရီပါဝငျပွီး၊ ကိုယျလကျစထရောလုံးဝ ၁၀၀% ကငျးစငျတာက အံဖှယျရာပါဘဲ။
စှနျပလှံသီးတှငျ ပါဝငျသော အာဟာရဓါတျနှုနျးမှာတော့
(၂) ဗီတာမငျ B1, B2, B3 နှငျ့ B5 တို့ကွှယျဝစသေညျ့ အပွငျ ပရိုတိနျးဓာတျကိုလညျး ကွှယျဝစတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Gym အားကစားသမားမြားအတှကျ (Pre and Post Workout)မကစားခငျနှငျ့ကစားပွီးခြိနျတှငျ အနညျးဆုံး စှနျပလှနျသီး ၂ လုံးမြှစားသုံးယူသငျ့ပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျပွုနသေူမြားအတှကျ သဘာဝအခြိုဓါတျပါဝငျတဲ့ စှနျပလှနျသီးတနေ့ ၃-၄လုံးရဲ့အခြိုဓါတျဟာ ကနျြးမာရေးအပျေါသကျရောကျမူ့မြားစှာမဖွဈစပေါဘူး။
(၅) သှားမြား ဆှေးမွခွေ့ငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
(၆) စှနျပလှနျသီးကို ရဖွေငျ့ သောကျပေးပါက ဝမျးခြုပျခွငျးကိုလညျး ကာကှယျနိုငျ ပါတယျ။
(၇) စှနျပလှနျသီးသညျ ကွှကျသားမြားကို သနျမာစနေိုငျတဲ့ အပွငျ ခန်ဓာကိုယျ သှယျလစြခေငျြသူတို့ အတှကျ စားသငျ့ပါတယျ။
(၈) အရကျကွောငျ့ ဖွဈသော ရောဂါ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ဖွဈသော ကငျဆာရောဂါကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ။
(၉) အမွငျအာရုံကိုလညျး ကွညျလငျစပေါတယျ။
(၁၀) Low blood Pressure သှေးပေါငျကခြွငျး၊ Paralyisis လဖွေတျခွငျး၊ Facial Paralysis မကျြနှာတဈခွမျးလဖွေတျခွငျး တို့ကို ကာကှယျပေးပါသညျ။